မြန်မာစစ်ဖက်ထိပ်တန်း အရာရှိ ၁၃-ဦးကို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု့ဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ပြောဆို။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အခြားထိပ်တန်းအရာရှိကြီး ၁၂-ဦး အမည်များဖော်ပြ။ - Eureka Myanmar | Myanmar news, headlines, top stories , culture and entertainment.
Home Article Crime Headlines Human Right LocalNews Military Myanmar News NLD WorldNews မြန်မာစစ်ဖက်ထိပ်တန်း အရာရှိ ၁၃-ဦးကို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု့ဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ပြောဆို။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အခြားထိပ်တန်းအရာရှိကြီး ၁၂-ဦး အမည်များဖော်ပြ။
Article Crime Headlines Human Right LocalNews Military Myanmar News NLD WorldNews
မြန်မာစစ်ဖက်ထိပ်တန်း အရာရှိ ၁၃-ဦးကို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု့ဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ပြောဆို။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အခြားထိပ်တန်းအရာရှိကြီး ၁၂-ဦး အမည်များဖော်ပြ။
မြန်မာစစ်ဖက်ထိပ်တန်း အရာရှိ ၁၃-ဦးကို ဘင်္ဂလီမွတ်စလင်များအပေါ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု့ဖြင့် တရားစွဲဆိုရန် နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ပြောဆို။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အခြားထိပ်တန်းအရာရှိကြီး ၁၂-ဦး အမည်များဖော်ပြ။
((( Amnesty International., 27 June 2018. “Myanmar: Military top brass must face justice for crimes against humanity targeting Rohingya “ ကို ဆီလျှော်အောင် ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ဆိုသည်)))
မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်များသည် ဘင်္ဂလီမွတ်စလင်များအပေါ်တွင် လူသတ်ခြင်းခြင်း၊ မုဒိန်းပြုကျင့်ခြင်းနှင့် အတင်းအဓမ္မနှင်ထုတ်ခြင်းစသည်ဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တွင် ကွဲပြားခြားနားသော ပြစ်မှု့ ၉- မျိုး ကျုးလွန်ကြရာ၌တာဝန်ရှိသော အဓိက ထိပ်တန်းစစ်ဖက်ထိပ်တန်းအရာရှိကြီး ၁၃-ဦး၏ အမည်ကို နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က ယနေ့အစီရင်ခံသည်။ ကျူးလွန်မှု့ ကွင်းဆက်၌ အမိန့်ပေးရာ၌ ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူများအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီနှင့် နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်ခုံရုံးတို့ကို လွှဲပြောင်းပေးရန် ယခုကဲ့သို့ အစီရင်ခံခြင်း ဖြစ်သည်ဆို၏။
မြန်မာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် အခြားသော အရာရှိကြီး ၁၂-ဦးတို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားတွင် ဘင်္ဂလီမွတ်စလင်များအပေါ်၌ လူမျိုးသုတ်သင်မှု့ကို ကျူးလွန်ရာ၌ ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (Amnesty International ) က ကျယ်ပြန့် ခိုင်မာသော သက်သေ အထောက်အထားများစုဆောင်းထားသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့၏ ရှည်လျှားသော အစီရင်ခံစာတွင် ရခိုင်မြောက်ဖျားပိုင်း လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ရာဇ၀တ်မှု့များ ကျူးလွန်ရာ၌ စစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူများကို နိုင်ငံတာရာဇ၀တ်ခုံရုံးသို့ လွှဲပြောင်း၍ စစ်ဆေး တရားစွဲဆိုရန်ပြောဆိုလိုက်သည်။
( အစီရင်ခံစာမှာ A4 Size ၇-မျက်နှာမျှ ရှည်လျှားပါသဖြင့် ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည် )
Tags: Article Crime Headlines Human Right LocalNews Military Myanmar News NLD WorldNews